Tetik'asa fanokafana tato an-tetikasa ho anao - tetikasam-pankasitrahana
Hazo Tattoo Fanosotra Tetik'ady ho anao
sonitattoo Janoary 12, 2017
1. Ny tato an-dalamby ao amin'ny tratrany dia mampiavaka ny olona
Tian'ny olona ny manana tato-tsoavaly ao amin'ny tratrany ambony miaraka amin'ny loko mainty hoditra. Izany dia manome endrika maotina
2. Ny tatoatan'ny soavaly amin'ny lamosina misy loko menamena dia mahatonga ny olona hijery tsara
Tian'ireo lehilahy ny manao tato-tsoavaly amin'ny lamosina volom-boanjo. Izany dia manome ny mijery tsara ny lehilahy.
3. Ny tato-tsoavaly eo amin'ny soroka dia mitondra ny endrika mahafinaritra
Ny zazavavy mitafy blazes marefo dia tia maka ny tato-tsoavaly amin'ny endriny mainty eo amin'ny sorok'izy ireo. Izany dia mahatonga azy ireo ho tsara tarehy kokoa
4. Ny tato-tsoavaly eo amin'ny sandriny ambony dia mahatonga ny zazavavy hijery be dia be
Tian'ny zazavavy ny manao tato-tsoavaly eo amin'ny sandriny ambony miaraka amin'ny loko volomparasy. Ity endrika tatoazy ity dia mahatonga azy ireo ho tsara tarehy sy mahafatifaty
5. Tato-tsoavaly amin'ny endrika manga sy maitso mavo no mahatonga ny vehivavy hahita tarehy
Ny vehivavy dia tia ny tonta maingoka amin'ny volombava miaraka amin'ny ravina manga sy maitso manga; Izany sary tatoazy izany dia mahatonga azy ireo hibanjina
6. Ny tato-tso-tsoavaly ao amin'ny tratrany ambony dia mahatonga ny olona hanana endrika miavaka
Lehilahy toy ny tato-tsoavaly eo amin'ny tratrany ambony misy loko mainty. Ity endrika tatoazy ity dia mahatonga azy ireo hanana endrika malaza
7. Ny tato-tsoavaly amin'ny soroka dia manome ny ankizivavy ho babo
Ny zazavavy, manao akanjo marefo marefo dia handeha ho an'ny tato-tsoavaly eo amin'ny sorok'izy ireo miaraka amin'ny loko volomparasy volomparasy sy volom-borona mba hampisehoana ny fijeriny ho any amin'ny vahoaka
8. Tato an-dalamby ho an'ny loko volomparasy volomparasy, eo amin'ny sandriny havia havia no maneho ny tarehiny amin'ny lehilahy
Tian'ny olona ny manana tato-tsoavaly eo amin'ny sandriny havia ambony. Manana loko volomparasy io endrika tatoazy io, izay manome azy ireo endrika fisaka
9. Ny tato-tsoavaly amin'ny tendron-pandriana dia manome ny ankizivavy ho tsara tarehy
Ny ankizivavy, indrindra fa mitafy tendan-kanina fohy sy fehiloha fohy, dia handeha ho an'ny tato-tsoavaly eo amin'ny andilany ka hahasarika azy ireo kokoa ho an'ny lehilahy.
10. Ny tato-tsoavaly eo an-damosiny dia mampiavaka ny vehivavy
Ny vehivavy dia tia ny tato-tsoavaly amin'ny lafiny iray miaraka amin'ny loko mainty mainty; Izany sary tatoazy izany dia mahatonga azy ireo hibanjina
11. Ny tato-tsoavaly amin'ny endrika loko mainty dia mitondra endrika mahafinaritra
Ny vehivavy Brown dia ho tia ny tato an-dalamby miaraka amin'ny loko mainty; Ity tatoazy ity dia mifanitsy amin'ny loko hoditra mba hahatonga azy ireo hijery sexy sy mahafinaritra
12. Ny tato an-dalamby amin'ny soroka dia mahatonga ny olona hahita foxy
Ity tapa-tsoavaly ity miaraka amin'ny loko mavomavo mavomavo dia mifanandrify amin'ny loko volon'ny lehilahy volom-borona. Io tatoazy io dia hahatonga ilay lehilahy hanamboarana sy hanamafisany kokoa
13. Tati-tsoavaly mitaingina volom-borona mavokely mba hitazomana ny mijery olona.
Ireo lehilahy izay manao akanjo marefo dia te-handeha amin'ny tato-tsoavaly miaraka amin'ny loko volomparasy mena mba hisarihana ny sain'ny olon-kafa ary hanome endrika azy tsara.
14. Ny tato an-dalamby amin'ny soroka dia mahatonga ny olona hahita foxy
Ity tapa-tsoavaly ity miaraka amin'ny loko mainty mainty no mifanitsy amin'ny loko hoditra menamena. Io tatoazy io dia hahatonga ilay lehilahy hanamboarana sy hanamafisany kokoa
15. Ny tato-tsoavaly amin'ny tongotra dia mahatonga ny vehivavy ho tsara tarehy.
Ny tato-tso-tsoavaly amin'ny tongony dia mahatonga ny vehivavy hahita fa tsara sy mahafinaritra kokoa ny vahoaka.
16. Tattoo-tsoavaly amin'ny endrika manga manga no mampiavaka ny olona
Tian'ny olona ny manana tato-tsoavaly miaraka amin'ny loko manga. Izany dia manome endrika maotina
17. Ny tato-tso-tsoavaly eo amin'ny fefy ambony dia mahatonga ny ankizivavy ho maotina
Ny vehivavy dia tia tato an-doha amin'ny tendron-tsofa ambony mba hanomezana endrika azy ireo.
18. Ny tato-tsoavaly eo amin'ny tongotra dia mitondra fiheverana vehivavy
Tia ny tovovavy mahafatifaty tsara tarehy eny an-tongotra ny zazavavy. Mampiseho tarehy tsara tarehy io tarehimarika tatoazy io
19. Tattoo-tsoavaly amin'ny soroka misy loko mainty mainty ahafantarana ny olona foxy
Ity tato-tso-tsoavaly ity eo amin'ny soroka misy loko mainty hoditra dia mifanandrify amin'ny loko hoditra menamena. Io tatoazy io dia hahatonga ilay lehilahy hanamboarana sy hanamafisany kokoa
20. Ny tato-tsoavaly amin'ny tendron-pandriana dia manome ny ankizivavy ho tsara tarehy
21. Ny tato an-dalamby ho an'ny fehiloha dia mitondra ny endriky ny vehivavy
Tovovavy toy ny tato-tarehy tsara tarehy eo amin'ny feny. Ity endrika tatoazy ity dia manintona ary manatsara ny kalitaon'ny vehivavy.
22. Ny tato-tsoavaly amin'ny tendron-tsofina amin'ny endrika loko mainty dia mahatonga ny ankizivavy ho mahafinaritra be
Tian'ireo ankizivavy manao tolo-tsoavaly eo amin'ny lafiny feny miaraka amin'ny loko mainty mainty. Ity endrika tatoazy ity dia mahatonga azy ireo ho tsara tarehy sy mahafatifaty.
23. Ny tato-tsoavaly eo amin'ny andilany dia mampiavaka ny vehivavy
Ny vehivavy dia tia ny tato ho an'ny tokantrano eo an-kibony; Izany sary tatoazy izany dia mahatonga azy ireo hibanjina
24. Ny tato-tsoavaly mitaingina miaraka amin'ny loko mavomavo mavomavo dia manome endrika mahafinaritra
Ny vehivavy Brown dia ho tia ny tato-tsoavaly amin'ny lafiny iray miaraka amin'ny loko mavomavo manga; Ity tatoazy ity dia mifanitsy amin'ny loko hoditra mba hahatonga azy ireo hijery sexy sy mahafinaritra
henna tattooelefanta tatoazytattoos mahafatifatytattoos rahavavytatoazy voninkazolion tattoosmoon tattoosfitiavana tatoazykoi fish tattoocompass tattooTattoo Feathertatoazy lolocat tattoosmehndi designmozika tatoazyloto voninkazotattoo ideastattoo eyetattoo octopusHeart Tattoostato ho an'ny vatofantsikatatoazy fokotattoo watercolorTatoazy ara-jeometrikaraozy tatoazytattoo infinitytattoosnamana tattoos tsara indrindratattoostattoos voronarip tattoosscorpion tattootattoos mpivadytattoos backtatoazy ho an'ny zazavavytratra tatoazytanana tatoazytattoos foottattoos crosstattoo cherry blossomdiamondra tattootattoos sleevemasoandro tatoazytattoos ho an'ny lehilahyanjely tattoosAnkle Tattooseagle tattoostattoos armNy zodiaka dia mampiseho tatoazyarrow tattoo